မကွာခငျကရြောကျတော့ မယျ့ ပိုပိုမှေးနအေ့တှကျဆုတောငျးပေးရငျး လကျရှိအခွအေနတှေကေို စိတျမကောငျးစှာပွောပွလာတဲ့ Hu Go – XB Media Myanmar
မကွာခငျကရြောကျတော့ မယျ့ ပိုပိုမှေးနအေ့တှကျဆုတောငျးပေးရငျး လကျရှိအခွအေနတှေကေို စိတျမကောငျးစှာပွောပွလာတဲ့ Hu Go
ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးတှကေတညျးက ဒီနအေ့ခြိနျထိ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ နာမညျကြျောအနုပညာ ရှငျတှထေဲမှာ အဆိုတျောပိုပိုကလညျး တဈယောကျအပါအဝငျပါပဲ..။အဆိုတျောပိုပိုအတှကျ ပွညျသူပရိသတျတှအေပွငျ အနုပညာရှငျတှတေျော တျောမြားမြားကလညျး စိတျပူနကွေသ လို သူငယျခငျြးဖွဈသူ မျောလျဒယျသရုပျဆောငျ Hu Go ကလညျး မှေးနဆေု့ တော ငျးစကားတှနေဲ့အတူ လကျရှိအခွအေနတှေကေို ပွောပွလာပါတယျ..။
မကွာခငျမှာ ကရြောကျတော့မယျ့ မှေးနလေ့ေးအတှကျ ဆုတောငျးစကားတှနေဲ့ အမှတျတရအကွောငျးတှအေပွငျ ပိုပိုနဲ့ပတျသကျတဲ့ လ ကျရှိအခွအေနတှေကေိုလညျး Hu Go က အသိပေးပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
ပိုပိုဘယျမှာလဲ ဘယျထောငျမှာလဲဆိုတာ မိသားစုတှအေပွငျ ဘယျသူမှ မသိကွတဲ့အကွောငျးတှေ၊ သူမရဲ့လုံခွုံရေးနဲ့ ပတျ သကျပွီးတော့လညျး ဝမျးနညျးစိတျမကောငျးဖွဈကာ အမွနျဆုံးပွနျလညျလှတျမွောကျဖို့ကိုလညျး ဆုတောငျးပေးထားတာပါ..။
“နောကျ၆ရကျနရေငျ Happy Birthday ပါ အမရေ 💔 ထပျဆငျ့ဝမျးနညျးရပွနျပီဗြာ! မှတျမိပါသေး တယျ မှေးနမှေ့ာဘာမှမပေးနဲ့ သူ ငယျခငျြးတှေ စုံအောငျလာရငျပဲ ပွညျ့စုံ​ပွီလို့ ပွောခဲ့တာကို 💔 အခုတော့ အမဘယျမှာရှိလဲဆိုတောငျ မသိရဘူး💔 မတရားဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ မပိုပို
မှေးနမှေ့ာအမွနျဆုံးလှတျမွောကျပါစေ! သတငျးတခုခုတော့ကွားရပါစေ She is My Friend and After 6days She have Her Birthday! She IsaFamous Singer In our Land! BUT…👇👇👇 she is in the jail since April!
and nobody knows where is she and which jail That they took her… That’s not secure for her life! Maybe They Killed her! We have no information about her and Either Her Family! She is innocent and she just stand for justice! Thats why military coups arrested her withoutareason! ❌ Please Speak-Out for her ❌ Save_Myanmar
What_Happen_In_Myanmar..” ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာ ရေးသားပွောပွထားတာပါ..။ Hu Go ရဲ့ အဲ့ဒီပို့ဈအောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေလညျး ပိုပိုအတှကျ စိတျပူနကွေတဲ့အကွောငျးတှနေဲ့ အားပေးစကားတှလေညျး ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Hu Go’s Fb Acc
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတည်းက ဒီနေ့အချိန်ထိ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ နာမည်ကျော်အနုပညာ ရှင်ေ တွထဲမှာ အဆိုတော်ပိုပိုကလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ..။အဆိုတော်ပိုပိုအတွက် ပြည်သူပရိသတ်တွေအပြင် အနုပညာရှင်ေ တွေ တာ် တော်များများကလည်း စိတ်ပူနေကြသ လို သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင် Hu Go ကလည်း မွေးနေ့ဆု တော င်းစကားတွေနဲ့အတူ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ပြောပြလာပါတယ်..။
မကြာခင်မှာ ကျရောက်တော့မယ့် မွေးနေ့လေးအတွက် ဆုတောင်းစကားတွေနဲ့ အမှတ်တရအကြောင်းတွေအပြင် ပိုပိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လ က်ရှိအခြေအနေတွေကိုလည်း Hu Go က အသိပေးပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပိုပိုဘယ်မှာလဲ ဘယ်ထောင်မှာလဲဆိုတာ မိသားစုတွေအပြင် ဘယ်သူမှ မသိကြတဲ့အကြောင်းတွေ၊ သူမရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီးတော့လည်း ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းပေးထားတာပါ..။
“နောက်၆ရက်နေရင် Happy Birthday ပါ အမရေ 💔 ထပ်ဆင့်ဝမ်းနည်းရပြန်ပီဗျာ! မှတ်မိပါသေး တယ် မွေးနေ့မှာဘာမှ မပေးနဲ့ သူ ငယ်ချင်းတွေ စုံအောင်လာရင်ပဲ ပြည့်စုံ​ပြီလို့ ပြောခဲ့တာကို 💔 အခုတော့ အမဘယ်မှာရှိလဲဆိုတောင် မသိရဘူး💔 မတရား ဖမ်းဆီး ခံ ထားရတဲ့ မပိုပို
မွေးနေ့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ! သတင်းတခုခုတော့ကြားရပါစေ She is My Friend and After 6days She have Her Birthday! She IsaFamous Singer In our Land! BUT…👇👇👇 she is in the jail since April!
What_Happen_In_Myanmar..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။ Hu Go ရဲ့ အဲ့ဒီပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း ပိုပိုအတွက် စိတ်ပူနေကြတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ အားပေးစကားတွေလည်း ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Hu Go’s Fb Acc